Home Wararka Fahad Yasin oo awoodiisa markale ku muujiyay shirkii xalay uu la yeeshay...
Fahad Yasin oo awoodiisa markale ku muujiyay shirkii xalay uu la yeeshay taliska NISA
Fahad Yasin ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku jiray soo bandhigida awoodiisa isaga oo kulmo kala duwan la qaatay qaar kamida saraakiisa ciidanka ciidanka kala duwan iyo saaxiibadiisaba.
Fahad Yaasiin oo hada ah lataliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhanka Amniga , ayaa xalay kulan casha ah oo isugu jiray dhoolatus awood iyo dardaran isugu yeeray dhamaan saraakiisha hay’ada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, iyadoo kulanka looga hadlay khilaafaadka hareeyay hay’ada dhexdeeda.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay kulanka waxaa ka qeyb galay sidoo kale taliyaha booliska Jeneraal Xijaar, Milatariga Jeneraal Odowaa, Booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, taliyaha NISA ee uu magacaabay Farmajao Yaasiin Fareey, Duqa Muqdisho Cumar Filish iyo gacan yaraha 1aad ee Fahad Xildhibaan C/raxmaan Dheere.
Kulanka kahor dhamaan xubnihii madasha soo xaadirtay marka laga reebo Duqa Muqdihso ayaa loo sheegay in ay banaanka uga soo tagaan taleefanada iyo Faraantiyadda ay wataan, si aan wax sawirro ah looga qaadin, maadaama Fahad uu xasaasiyad gaara ka qaaday sawirro baraha buslhaada lagu faafiyay oo todobaadkii hore garoonka Jabuuti looga qaaday
Saraakiil kulanka fadhiday waxey inoo sheegeen in Fahad Yaasiin uu u muuqday ruux saraakiisha kale ee NISA u soo bandhigayay awoodiisa, isagoo si cad ugu sheegay in NISA aysan gacantiisa marnaba ka bexeynin. Waxa uu saraakiisha u xaqiijiyay in xalka khilaafka madaxda sare ee dalka uu dhadhaw yahay, wuxuuna tilmaamay in Bashiir Goobe iyo Yaasiin Fareey ruux aan aheyn la keeni doono taliska hay’adda NISA.
“ Wuxuu si cad noogu sheegay in taliyaha NISA aan banaanka laga keeni doonin oo laga soo dhex saari doono oo kaliya saraakiisha NISA ee hadda shaqeysa, wuxuuna tilmaamay in 4-ta talis ciidan ay isaga hadda wixii ka danbeeya hoostagayaan maadaama laga dhigay lataliyaha amniga qaranka” ayuu warbaahinta gaarka loo leeyhay u sheegay sarkaal diiday in magaciisa aan adeegsanno.
Waxaa Nasiib xumo ah in Fahad Yasin uu kulmo isugu yeerayo saraakiishii ciidanka ee ahayd in Ra’iisal Wasaare Rooble hoos yimaadaan. Tani ayaan ka tarjumeysa in RW Rooble uu maalinba maalinta ka danbeeysa uu sii luminayo karaamadiisa iyo qayimka uu ku leeyahay dowladnimada Soomaaliya.